Ogaden News Agency (ONA) – ANC oo Jacob Zuma Ka Codsaday In uu Iscasilo.
ANC oo Jacob Zuma Ka Codsaday In uu Iscasilo.
Posted by ONA Admin	/ February 14, 2018
Xisbiga haya talada dalka Koonfur Afrika ee ANC ayaa si rasmi ah uga codsaday madaxweyne Jacob Zuma inuu is casilo. Wararka ayaa sheegaya in arrintan ay ka dambeysay markii uu madaxweynuhu mar sii horreysay diiday inuu is casilo.
Go’aankan ah in xilka laga qaada madaxweynaha ayaa ka dambeeyay kulan shalay dhacay oo ay lahaayeen masuuliyiinta xisbiga. Haddii Zuma oo 75 sano jir ah uu diido baaqa xisbigiisa, waxaa laga yaabaa in loo qaada codka kalsoonida waxayna u badan tahay inuu waayi doono.
Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in Mr Zuma uu oggoladay in uu iscasilo, balse uu dalbaday in muddo saddex bilood ah uu xafiiska sii joogo. Wuxuu xilkan hayay tan iyo sanaddii 2009, waxaana tan iyo marakaasi hadheeyay madaxweynaha eedeymo musuqmaasuq ah.
Mab’da ahaan wuu iska dhagatiri karaa dalabka xisbiga ee ah in uu xilka ka dago , balse taasi waxa ay horseedi kartaa in codka kalsoonida ay u qaadaan baarlamaanka taasi oo caddayn karta kala qaybsananta xooggan ee xisbiga dhexdiisa.
Xisbiyada mucaaradka ayaa dhankooda u arka jahwareerka ka dhex jira ANC in uu yahay mid aa micno badan ku fadhin. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Economic Freedom Fighters horeyna u ahaa hogaamiyaha garabka dhalinyarada ee ANC Julius Malema, ayaa kulanka saraakiisha xisiga ANC ay yeesheen ku tilmaamay mid aan faa’ido lahayn.
Waxa uu ku eedeeyay xisbigiisi hore in ay isku dayayaan in ay badbaadiyaan nidaam musuqmasuq . Hogaamiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ee Democratic Alliance, Mmusi Maimane, ayaa dhankiisa ku eedeeyay xisbiga ANC in aysan dhab ka ahayn dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa.
Madaxwaynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu wajahayaa dacwado la xidhiidha musuqmaasuq waxa uuna in muddo ah ku adkaysanayay mowqifkiisa ah in uusan xilka ka dagin.